Public Health in Myanmar: April 2010
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရင်လို နေလို့ရသလား။ Is it safe to live as before during pregnancy?
အင်္ဂလိပ်လို တွဲခေါ်လို့ ကောင်းတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးရှိတယ်။ Intercourse ဆိုတဲ့ အင်္ဂါချင်းဆက်ဆံမှုကို သတိထားခိုင်းပြီး၊ Intimacy ဆိုတဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဝ ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ကြဘို့ကိုတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် တလျောက်လုံး မဖြစ်အနေလုပ်ဘို့ အကြံပြုတယ်။
Labels: Reproductive Health, Sex Education
“ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော် မနှစ်ကမှ အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ အတူနေတဲ့ အချိန်တိုင်း အကြိမ်တော်တော် များများမှာ အမျိုးသမီးရဲ့ အင်္ဂါဟာ အစပိုင်းခဏမှာ သွေ့ခြောက်နေတတ်ပါတယ်။ အတူနေချိန် အစပိုင်းဆို သူရော ကျွန်တော်ပါ နာကျင်ပြီး၊ သက်တောင့်သက်သာ မရှိဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စိုစွတ်လာပေမယ့် အပြင်ခဏ ထုတ်မိရင် ချက်ခြင်းလိုလို ပြန်ခြောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်၊ ဒီ အခက်အခဲကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်အကြံပေးပါဦးဆရာ။”
KY Jelly ကိုသုံးပါ။ Johnson & Johnson ကနေ ထုတ်တယ်။ ရေအခြေခံ Lubricant ဖြစ်လို့ ဆေးရင်လဲ လွယ်တယ်။ (ကွန်ဒွန်) ကိုလဲ မထိခိုက်စေပါ။ Vaseline (Petroleum Jelly) လို ဆီပါတာမျိုးက (ကွန်ဒွန်)ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးမှရတယ်။ အိမ်သုံးဆီတခုခု သုံးတာက သုံးလို့ရပေမဲ့၊ မသန့်ရင် မှိုရောဂါ ၀င်တတ်တယ်။ KY Jelly က ဘာ အန္တရာယ်မှ မရှိပါ။ နာမည် အမျိုးမျိုးတော့ ရှိနိုင်တယ်။ Tube, Cream, Liquid အမျိုးမျိုး အတူတူဘဲ။
“ကျွန်တော်က အသက် ၃၀၊ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးက ၂၉ နှစ်ပါ။ အခုလို ကိစ္စမျိုးက အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါသလား။ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးလဲ သိပါရစေ။ နောက်ပြီးတော့ (ဂျယ်လီ) ကို သုံးရင် (ကွန်ဒွန်) မပါပဲ၊ သုံးဖို့ သင့်-မသင့် လမ်းညွှန်ပေးပါဦး ဆရာ။”
မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်နေခြင်း Dryness of Vagina က အများအားဖြင့် အသက် ၄၅ ကျော် Menopause သွေးဆုံးရင် သေချာပေါက် ဖြစ်တယ်။ ကျန်အရွယ်တွေမှာက ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ်။ Estrogen ခေါ်တဲ့ မ-ဟော်မုန်း နည်းသွားလို့ပါ။ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေခံ ရောဂါတွေလဲရှိတယ်။ Hypothyroidism လည်ပင်း-သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်း နည်းရောဂါ နဲ့ Vaginitis (ဗဂျိုင်းနား) ရောင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုဓါတ်ဟာ ဆီးချိုရှိရင်လဲ နည်းတယ်။ ဘာလို့ ဖြစ်ရမှန်း မသိတာလဲ ရှိပါတယ်။
Vaginitis ကတော့ STD/STI လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ တခုခုကြောင့်ပါ။ ဆေးကုလို့ လွယ်ပါတယ်။ Hypothyroidism ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အားယုတ်တာ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် (အနည်းငယ်) တိုးတာ၊ အအေးဒဏ် မခံနိုင်တာ၊ အိပ်ချင်စိတ် ကဲနေတာ၊ အသားအရေ ခြောက်တာ၊ ၀မ်းချုပ်တာ၊ ကြွက်သားနာတာ၊ (ကိုလက်စထော) များတာ၊ စိတ်အာရုံစိုက်မှု နည်းလာတာ နဲ့ ခြေထောက်ရောင်တာတို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီစာမျိုး ရေးရတာက ခေါင်းစဉ်တခုကို တတ်နိုင်သလောက် ပြည့်စုံအောင်ရေးမှ ဖြစ်တာ။ လူ တထောင် တယောက်၊ တသောင်း တယောက် ဖြစ်နိုင်တာလဲ မချန်ရဘူး။ ဖတ်တဲ့သူက ပိုလို့တောင် သတိထားသင့်တယ်။ စာဖတ်ရင်း လည်ပင်း စမ်းနေသူလဲ ရှိနိုင်တယ်။ အစိုးရိမ် မကြီးစေချင်ပါ။ လက္ခဏာတွေဆိုလဲ သေးသေးဖွဲဖွဲလဲ ပါရတာ။ ရေးတဲ့ထဲမှာ ၀မ်းချုပ်တာတခု ပါနေတာမို့ ဖတ်တဲ့သူက တရက်လောက် Bathroom မသွားရင်ကို ငါ့မှာ ဒါဖြစ်သလား သွားထင်မိမှာ စိုးရသေးတယ်။ ပညာနဲ့ ဆင်ခြင်ပါလေ။
အရွယ်ရှိစဉ်မှာ (ဗဂျိုင်းနား) ကို ဖုံးထားတဲ့ အရေပြားဟာ ပြည့်ဖေါင်း၊ နီရဲ (ပန်းရင့်ရောင်)၊ ရှိပြီး၊ အမြဲလို စိုစွပ်နေတယ်။ ကြုံ့နိုင်-ဆန့်နိုင်တယ်။ လိင်စိတ်ရှိလာချိန်မှာ ပိုပြီး စွပ်စိုလာတာက (ဗဂျိုင်းနား) အ၀၊ အတွင်းကရှိတဲ့ Bartholin's glands ဆိုတဲ့ အကြိတ်နှစ်ခုကနေ အရည် ထွက်ပေးလို့ပါ။ မ-ဟော်မုန်း နည်းလာတာနဲ့အမျှ အဖုံးလွှာက ပါး၊ ဖြူ(ဖြူပြာ)၊ ခြောက်လာတယ်။ ကြုံ့နိုင်-ဆန့်နိုင်စွမ်းပါ နည်းလာတယ်။ သွေးဆုံးချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်လာတာ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပါ။ Vaginal atrophy (ဗဂျိုင်းနား) သေးကြုံ့တဲ့ရောဂါလို့ ခေါ်တယ်။
မ-ဟော်မုန်း Estrogens ဆိုတာ မျိုးဥအိမ် Ovaries တွေကနေ ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ သူ့အစွမ်းကြောင့် မိန်းကလေးဟာ ရင်သား ဖွံ့ထွားလာစေတယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းကလည်း ငါးရံ့ကိုယ်ဖြစ်လာစေတယ်။ ကိုယ်က မွှေးညှင်းလေးတွေကိုလဲ ချောနုလာစေတယ်။ ရုပ်သွင်ကို သာမက လစဉ်ရာသီလာတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတို့အတွက်ကိုလဲ လုပ်ပေးတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းခြောက်တာက သွေးဆုံးတာနဲ့ မဆိုင်ဘဲလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးဖွါးပြီးချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများချိန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တချို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခြောက်နေရင် ပူစပ်နေတာကိုတော့ ခံစားရတတ်တယ်။ မလိုဘဲနဲ့တော့ ဆေးကုစရာမလိုပါ။ သွေးဆုံးသည်ဖြစ်စေ မဆုံးသည်ဖြစ်စေ ကျား-မ ဆက်ဆံချိန်မှာ ပြဿနာရှိလာတာ (နာတာ-ခြောက်တာ) ဆိုရင် ကုပါ။ ကုနည်း အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။
ဟော်မုန်းပေးကုတာကို (HT) ခေါ်တယ်၊ (PHT) လဲခေါ်တယ်၊ (HRT) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ အထူးလိုတာမို့ အထူးကုနဲ့သာ ကုသင့်တယ်။ အခက်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ။ စားဆေးနည်းရော ဆေးထည့်နည်းရော ရှိတယ်။ Vaginal estrogen ring ဆေးကွင်း၊ Vaginal estrogen cream (ခရင်မ်)၊ Vaginal estrogen tablets ဆေးပြား၊ အမျိုးများတယ်။ Estriol Cream BP (Evalon Cream) ကို OG ကညွှန်လို့ သုံးခါစမှာ သကြားနဲ့ဆား မှားတာကို လူနာတယောက် ကြုံရဘူးတယ်။ အစသာ ဖြစ်တာပါ။
(KY jelly) (ဂျယ်လီ) က အများဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ အရွယ်မရွေး သုံးနိုင်တယ်။ ရေနဲ့လုပ်တာ၊ ဆီမပါလို့ ဆေးရတာ လွယ်တယ်။ (ကွန်ဒွန်)ကိုလဲ မထိခိုက်စေဘူး။ (ကွန်ဒွန်) မပါဘဲလဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဈေးချိုတယ်။ ၀ယ်ရတာ လွယ်တယ်။ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရောင်းတယ်။ အခါ ၅၀ လောက် သုံးနိုင်တာရော၊ ခရီးဆောင်ရော။ သုံးသူ အဆင်ပြေ၊ ရောင်းသူငွေရ။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးက Yeast မှိုပိုး မကြာမကြာ ရတတ်သူဆိုရင် ရိုးရိုး (ဂျယ်လီ)က (ဗဂျိုင်းနား)ရဲ့ pH အက်စစ်ဓါတ်နဲ့ မတူလို့ pH တူတဲ့ Astroglide (Silken Secrete) ကို ရှာဝယ်သင့်တယ်။ ဒီဆေးကိုတော့ Applicator နဲ့ ထည့်ရတယ်။ အတွင်းထဲထိ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပမဲ့ လက်တွေ့မှာ အ၀နေရာမှာသာ ထည့်ပေးဘို့ လိုတာပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ငွေကြေးနဲ့ လဲရသူများမှာလည်း၊ အဖေါ်က မင်းသားလို ချောချော၊ ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေနေ၊ ဘယ်စိတ်မှ လာတာ မဟုတ်လို့၊ (ဂျယ်လီ) ကိုသာ အိပ်စိုက်သုံးကြရတယ်။
နောက်တမျိုးကတော့ Vaginal moisturizer စိုစွပ်စေတဲ့ထည့်ဆေး (Yes, Sylk, Replens or Senselle, K-Y Silk-E Vaginal Moisturizer or KY Liquibeads) တွေ ဖြစ်တယ်။ ရေငွေ့ဓါတ်ပေးတဲ့သဘောပါ။
ဗီတာမင် E ကို အမျိုးသမီးတွေအတွက် ညွှန်းပါတယ်။ သောက်ဘို့သာမက capsule အတောင့်ထဲက ဆေးကို ဖေါက်ပြီး၊ အဂ်ါအထဲ ညှစ်ထည့်ပေးနိုင်သေးတယ်။ ပဌမတပါတ်မှာ နေ့စဉ် အဲလိုလုပ်ပြီး၊ နောက်ဆိုရင် တပါတ်မှ ၁ ခါ၊ ၂ ခါသာ လုပ်ဘို့ လိုတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းကို သိပ်မညွှန်းတော့ပါ။ အဆီဖြစ်လို့ (ကွန်ဒွန်)ကို ထိခိုက်နိုင်လို့။ ဗက်တီးရီးယား အခြေအနေ ပြောင်းစေနိုင်လို့ပါ။
အစားအစာထဲမှာ Soy ပဲပုပ် နဲ့ Flax ဗီသွာ(နှမ်းကြတ်) တွေကလည်း ဒီနေရာမှာ ခြောက်နေတာကို စိုစေတယ်လို့ဆိုတယ်။ တချို့က နှမ်းဆီ စစ်စစ်ကို ဂွမ်းမှာ ဆွတ်ပြီး၊ (ဗဂျိုင်းနား) အတွင်းသားမှာ တနေ့တခါ တပါတ်ကြာ သုတ်လိမ်းခိုင်းတယ်။
တခြား အထောက်အကူပြုမဲ့နည်းတွေကတော့ ရေများများ သောက်ပါ။ အတူနေတာ အကြိမ်များလာရင်လဲ ပိုကောင်း လာနိုင်တယ်။ (ဖိုးပလေး) ခေါ်တဲ့ အင်္ဂါနှစ်ခု မထိစပ်ခင် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားတွေထက် စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှု နှေးတယ်။ ဘယ်သူကသုံးသုံး၊ (အိုရယ်) နည်း သုံးနိုင်တယ်။ တံတွေးသုံးနည်းကလဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှု ကောင်းကောင်း လုပ်ထားရမယ်။ ဒါတောင် အမျိုးသမီးမှာ ဆီးအောင့်တာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ သတိထားဘို့က ဆီ၊ တံတွေး၊ (အိုရယ်)နည်းကြောင့် ဗက်တီးရီးယား နဲ့ မှိုပိုး ၀င်တတ်တယ်။
Belladonna, Bryonia နဲ့ Lycopodium တို့က Homeopathic (ဟိုမီယိုပက်သစ်) ဆေးတွေပါ။
ကြော်ညာတာတွေလဲ ထည့်ရေးပါမယ်။ Aloe Vera gel, Fenugreek seeds, Ginkgo Biloba, Oat straw နဲ့ Black Cohosh Actaea racemosa စသဖြင့်ရှိတယ်။ Lady secret serum ဆိုတာက phyto-estrogen နဲ့ ထိုင်း-အိန္ဒိယ ဆေးဘက်ဝင် အပင်ထွက်တွေပါတယ်တဲ့။ “ကလေးဖွါးပြီးသူများ၊ (ဗဂျိုင်းနား) တအားကောင်းစေသည်” လို့ ကြော်ညာတယ်။
ဆေးပညာ ပညာပေးရတာမှာ ရေးသူအဖို့ ဖတ်သူရဲ့အခြေခံသိမှ ကောင်းတယ်။ အများဖတ်ဘို့ ရေးတဲ့အခါ အတော် ချင့်ချိန်ရတာ။ တချို့က “ချက်ဆို နားခွက်ကမီးတောက်” ပေမဲ့၊ တချို့က လုံးစေပတ်စေ့ ပြောတာတောင် လွဲသွားတာတွေ ရှိတယ်။
မိသားစုစီမံကိန်း ပညာပေးအစီအစဉ်တခုမှာ “ဟောဒီလို သုံးရတယ်” ဆိုပြီး၊ ဆရာသမားက (ကွန်ဒွန်)ကို လက်မမှာ ကျကျနန စွပ်ပြပြီး၊ စတိုင်ပါပါနဲ့ ပညာတော့ ပေးလိုက်တာပါဘဲ။ မကြာပါဘူး “ဆရာရယ် ဆရာပြောသလို လုပ်တာပါဘဲ၊ ကလေး ရှိပြန်ပြီ” ဆိုပြီး၊ (ကွန်ပလိမ့်) လာတယ်။ (ကွန်ဒွန်) လဲ မပေါက်၊ (ဒိတ်) လဲ မအောက်။ မနောက်ပါနဲ့ဗျာ ဘယ်လို စွပ်လဲ ပြောစမ်းပါအုံး။ “ညတိုင်း ညတိုင်း၊ ဆရာခိုင်းသလို ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်လက်မမှာ ကျကျနန စွပ်တာပါ။ ဘယ်-ညာတောင် မလွဲဘူး။” တဲ့ ခင်ဗျာ။
Labels: Q and A, Respiratory system, Sex Education
ကိုယ်ဝန်က သားအိမ်ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ တခြားနေရာတည်တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ What Causes Ectopic Pregnancy?
ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် Ectopic Pregnancy ဘာကြောင့် အဲလို ဖြစ်ရတာပါလဲဆရာ.. သိချင်ပါတယ်..
သိချင်လို့ မေးတာကို မသိတာနဲ့ စရတော့မှာဘဲ။ အများဆုံးကတော့ ဘာ့ကြောင့်မှန်း မသိပါ။ Risk factors ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေက အမျိုးရှိတယ်။ သားအိမ်ပြွန်မှာ ပြဿနာရှိသူ၊ ဆေးဝါးရဲ့ မကောင်းကျိုးဆက်များနဲ့ ဆေးလိပ် စွဲသူတွေမှာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါမျိုးကို တခုကမှ ဆရာဝန်တွေ ရှာမရသူကလည်း သုံးပုံတပုံကနေ တ၀က်အထိ ရှိတယ်။
Ectopic Pregnancy အများဆုံးဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ပြွန်ဆိုတာ သားအိမ်ရဲ့ထိပ်မှာ ချိုနှစ်ချောင်းလို ဘေးကားထွက်နေတာ။ တရိစ္ဆာန်ချိုလို သူများ သွားခွေ့ဘို့ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်ကြတော့ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ပိုတူတယ်။ မျိုးဥအိမ်ကနေ တလတခါ ထွက်နေကျ မျိုးဥကို ကောက်ယူ၊ စုပ်ယူ၊ ဆွဲယူ လုပ်ပေးတယ်။ သု့အထဲမှာ ပေါင်းစပ်စရာလဲ နေရာပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တလမှာ တခါသာ တာဝန်ကျတယ်။ ဒါတောင် အလုပ် အတော်ချောင်တဲ့သူတွေ၊ တဖက်က လုပ်ရင် နောက်တဖက်က လုပ်စရာမလို သန်းရှာနေယုံဘဲ။
ကလေးမရနိုင်တာကိုလဲ ထည့်ပြောတယ်။ အမှန်က ကလေးမရတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ အကျိုးပါ။ စုံအောင် ထည့်ရေးရရင် ကလေးမရအောင် ပြွန်ကို ဖြတ်-ချည်ထားတာလဲ ပါတာပေါ့။ ကလေးမရအောင် ပြွန်ကို Tubal cautery မီးသုံး ပိတ်တဲ့နည်း လုပ်ပေးထားသူတွေရဲ့ ၇၀%၊ Tubal ligation ပြွန်ကို ချည်နှောင်နည်းဆိုရင် ၃၀% တို့က သားအိမ်ပြင်ပ ကိုယ်ဝန် ရစေနိုင်တယ်။ ဆိုချင်တာက Sterilization လုပ်ထားပြီး Ectopic Pregnancy ဖြစ်သူတွေရဲ့ ရာနှုန်းကိုသာ ပြောတာပါ။ နောက်ပြီး Tubal sterilization reversal or tubal ligation reversal ဆိုတဲ့ ကလေးမရအောင် ပြွန်ကို တနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ထားပြီးခါမှ ကလေး ပြန်ရချင်သူကို ကြိုးစား ခွဲစိတ် ပြုပြင်နည်းကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်က သားအိမ်ပြင်ပမှာ တည်နိုင်သေးတယ်။ သဘာဝမဟုတ်ရင် ဘာမှမကောင်းပါ။
သားသမီးဝေးအောင် သားအိမ်ထဲ IUCD (Copper T, Loop) ပစ္စည်း ထည့်တာလဲ အဆင်မသင့်ရင် သားအိမ်ပြင်ပ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ အဆင်မသင့်တာသာ မကဘဲ၊ ဒါလုပ်ပေးရာမှာ ပိုးမသန့်ရင်လဲ PID ဖြစ်စေတတ်တယ်။
PID လို့ခေါ်တဲ့ တင်ပဆုံကွင်းထဲက အင်္ဂါတွေ ရောင်တာက လက်ညှိုးထိုး အခံရဆုံးဘဲ။ ဒီရောဂါထဲမှာ Gonorrhea နဲ့ Chlamydia ဆိုတဲ့ STD/STI လိင်ကနေ ကူးစက်ရောဂါတွေက အများဆုံးဘဲ။ ရောဂါ စဖြစ်တာက Vagina မွေးလမ်း ကြောင်းမှာပေမဲ့ အထက်တက်ပြီး၊ Uterus သားအိမ်၊ Tube သာအိမ်ပြွန်၊ Ovary မျိုးဥအိမ် စတာတွေဆီ ပြန့်နိုင်တယ်။ ရောဂါရရင် ပြွန်ထဲက လက်ချောင်းငယ်လေးတွေလိုရှိတဲ့ အလွှာက (ဆဲလ်)တွေ ပျက်စီးစေတယ်။ ဆေးကုလို့ ပိုးသေ၊ ရောဂါ ပျောက်ရင်တောင် အနာရွတ် ဖြစ်သွားလို့ မျက်နှာပြင် ပုံပြောင်းသွားပြီး၊ လမ်းကျဉ်းသွားစေတယ်။ ဒီတော့ မ-မျိုးဥနဲ့ ကျားသုတ်ပိုးတို့ ၀င်ကြ ထွက်ကြ လုပ်ရမှာကို တားဆီးတာမို့ ကိုယ်ဝန်က သားအိမ်အထဲ ၀င်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ၊ တခြား သွားတည်စေနိုင်တာပါ။
ကိန်းဂဏန်းရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကိုဘဲ ကိုးကား ပြောရရင်၊ အမေရိကားမှာ နှစ်တိုင်း အမျိုးသမီး တသန်းမှာ PID တွေ့နေရပြီး၊ တသိန်းမက ဒါ့ကြောင့် ကလေးမရ ဖြစ်နေကြရတယ်။ ထောင်နဲ့ချီပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ကြတယ်။ ဗိုက်အောက်နားက နာတာ၊ ရာသီရက် မမှန်တာ၊ အဖြူ-အ၀ါဆင်းတာ၊ ဆီးအောင့်တာ၊ အိမ်ထောင်နဲ့ အတူနေရင် နာကျင်တာစတဲ့ လက္ခဏာတွေက PID ရှိတာကို ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာ လက္ခဏာမှ မပြဘဲလဲ၊ PID ရှိနေတတ်တယ်။ အပျိုရွယ်ကတည်းက PID ရှိနေတာကို အိမ်ထောင်ကျမှ၊ ကိုယ်ဝန်ရမှ သိကြရတာလဲ မနည်းဘူး။ ဆက်ဆံဘက် များသူတွေမှာ ဒုက္ခ မလှမပ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အကာကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံသူတွေလဲ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (ကွန်ဒွန်) သုံးသင့်ကြတယ်။
Clomiphene citrate နဲ့ Pergonal ဆိုတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိအောင်လုပ်ပေးစေမဲ့ Fertility drugs ဆေးတွေ၊ Progesterone-like hormones ပါတဲ့ Contraceptive ပဋိသန္ဓေတားဆေး၊ Diethylstilbestrol (DES) ဆိုတဲ့ မ-ဟော်မုန်း စတီရွိုက်ဆေး ကြောင့်လဲ ပြောကြသေးတယ်။
Endometriosis ဆိုတဲ့ သားအိမ်က တစ်ရှူးတွေ အပြင်ထွက်ပြီး ပေါက်ပွါးတဲ့ရောဂါကြောင့်လဲ ပြွန်ကို ကျဉ်းစေတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ ၅ ဆပိုတယ်။ Nicotine က ပြွန်ကို ဆွပေးလို့ပါ။ အသက် ကြီးလာသူတွေမှာ ငယ်သူတွေထက် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အိုပြီဆိုရင် ဘာမှ မကောင်းပါလား။
ရောဂါမှန်သမျှ ဖြစ်ရတာမှာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ၊ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါးရှိတယ်။ ဘာမှ ရှာမရရင် ကံတရား ကြောင့်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့၊ တလင်တမယားသာနေ၊ (ကွန်ဒွန်) ကို အမြဲသုံး၊ ခွဲတာစိတ်တာ မခံရစေနဲ့။ ကံကောင်းအောင် သောက်ရေကန်၊ သုံးရေကန် တူး-ဆည်-သန့်ပေး၊ မွေးနေ့တိုင်း ဆွမ်းကြွေး၊ အနန္တော အနန္တငါးကို မပြတ် ဆီးကပ် ကိုးကွယ်ပါလေ။ မအိုစေနဲ့။
နက်ဖြန် အလှူနေ့ပါ။ သားတွေကိုသင်္ကန်းဆီး၊ သမီးကို နားသ၊ လာသမျှကို အ၀ကြွေးပြီး၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲကြီး ဝှဲချီး လုပ်မှာပါ။ “အလှူ” ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့ တသက်တာမှာ တခါတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတယ်။ အရပ်ကူ၊ လူဝိုင်း၊ ဆွေမျိုးတိုင်း လာကြ။ မိတ်ဆွေ ရင်းခြာတွေလည်း နီးသော၊ ဝေးသောမဟူ အလှူလာကြတယ်။ “မနက်ဖြန်အလှူရက် စည်ချက်မကျန်ဘူး” ပြောရမှာပေါ့။
အလှူ့တကာက ဆရာဝန်။ နယ်မြို့တွေမှာ ဆရာဝန်တိုင်း၊ ၈ နာရီတဆိုင်း မရှိပါ။ နေ့တိုင်း၊ နာရီတိုင်း ဂျူတီကျတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မြို့နယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တာ ကံကောင်းတယ်။ မွေးရပ်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ပြင်၊ လက်ထောက်ဆရာဝန်က ညီတော်တယ်။ သူက အလုပ်ကြိုးစားပြီး၊ ၀ါသနာမှာ ကျွန်တော်နဲ့ လာတူတာတွေ ရှိတယ်။ ခွဲချင်စိတ်ချင် ဒါးဆရာဝန်တွေ။ ပုံမှန်ဆိုရင် သူတလှည့် ကိုယ်တလှည့် ညဂျူတီယူကြတာ၊ အလှူကာလ တလျှောက်လုံး သူကချည်း တာဝန်ယူပေးပါတယ်။
အလှူဖိတ်နေ့ညမှာ အရေးပေါ်ပါလေရော။ ဆေးရုံက ၀န်ထမ်းတယောက် ယူလာတဲ့ (ဒစ်ရ်ှပက်) စာအုပ်မှာ “မွေးလူနာ လာတယ်။ အသက်ကြီးပြီး၊ မမွေးနိုင်ဘူး” တဲ့။ ဗိုက်ခွဲမွေးရမဲ့ လူနာမှန်း တန်းသိလိုက်ပါပြီ။ လက်ထောက်ဆရာဝန်က ဒီလောက်တော့ ထမင်းစား-ရေသောက်။ သူ့ကို “(LSCS) လုပ်ရန်” လို့ မှတ်ချက် ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ “လိုရင် ခေါ်ပါ” ပေါ့။
မကြာပါဘူး လိုပါလေရော၊ ခေါ်ပါလေရော။ နောက်တခါ (ဒစ်ရ်ှပက်) စာအုပ်ယူလာသူကို ညီတော်မောင်ဆရာသမားက စကားလဲ ပါးလိုက်တယ်။ “ဗိုက်ထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ့တယ်။ လာမှရမယ်” တဲ့။ နက်ဖြန် အလှူရှိတာရော လူနာ အခြေအနေရော သူ့ထက်သိတာ ရှိမှာ မဟုတ်ပါ။ သန်းခေါင်ကျော်နေတာလဲ သူ့နာရီနဲ့ ကိုယ့်နာရီ အတူတူပါ။ ဒါပေမဲ့ အလှူလဲ ကုသိုလ်၊ ဆေးကုတာလဲ ကုသိုလ်၊ နှစ်ထပ်ကွမ်းကုသိုလ် ယူရမှာပေါ့။ “အလှူ့အမရေ အိပ်နှင့်ပေတော့”။
ခွဲခန်းထဲ တန်းဝင်တာနဲ့ လူနာကို ခါးထုံဆေး ထိုးပြီးသား၊ ဗိုက်ကိုလဲ ဖွင့်ထားပြီးသား၊ ဗိုက်ထဲက ကလေးကိုလဲ မြင်နေရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လားလာ့း “ကလေးတခြား သားအိမ်တခြား”။
လူနာကို မှတ်မိပြီ။ အသက်က ၄၅ လောက်၊ ကိုယ်ဝန်မဆောင်တာ ကြာပြီးမှ ရှိလာပြန်လို့ ကိုယ်ဝန်လာပြထားသူ၊ တောင်ဘက် ကျောက်တောင်ရွာက။ တောနယ်တွေမှာ တရွာနဲ့တရွာ ဝေးကြတာ မဟုတ်ပါ။ အမျိုးစပ်ရင်လဲ နီးကြတယ်။ ဟိုဘက်ကတော်၊ ဒီဘက်ကတော်။ အမျိုးရဲ့ ဟိုဘက်ကအမျိုး စသဖြင့် ဆွေမျိုးချည်းဘဲ ထင်ရတယ်။ ကြုံလို့ ရေးရဦးမယ်။ ကျွန်တော့်ထက် ကျွန်တော့် အမျိုးတွေကို ကျွန်တော့်ဇနီးက ပိုသိ၊ ပိုရင်း၊ ပိုချစ်တယ်။ လုပ်ရတာက ဆရာဝန်မို့ လာသမျှ အမျိုးဘဲဆိုပြီး စိတ်ထဲ ထားလိုက်တာကြောင့်လဲ နည်းနည်းပါမယ်။ ရောချလိုက်တာဆိုလဲ ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
လူနာဟာ “သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း” Ectopic pregnancy ဆိုတာဖြစ်တာပါ။ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တယ် ဆိုတာ ဘယ်သားဖွါးမီးယပ်စာအုပ် လှန်ကြည့်ကြည့် အများဆုံး တည်တတ်တဲ့ နေရာတွေကို ဖေါ်ပြရင် သားအိမ်ပြွန် တနေရာရာမှာ ဖြစ်တာ ၉၅-၉၉%။ နောက်ပြီး သားအိမ်နံရံ တနေရာရာနဲ့ မျိုးဥအိမ်ဆိုတဲ့ နီးနီးနာနား နေရာများမှာသာ ဖြစ်တတ်တယ်။ မျိုးပွါးလမ်းကြောင်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ တခြားနေရာဆိုတာ ရှာမှရှား သွားဖြစ်တယ်။ ၀မ်းဗိုက်ခေါင်းထဲမှာ တည်တာ ပြောတာပါ။ အခုလူနာက အရှားဆုံးဟာ လာဖြစ်နေပါတယ်။
အများဆုံးဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ပြွန်ဆိုတာ အတွင်းခေါင်းအကျယ်က အကြောဆေး သွင်းပေးရတဲ့ပိုက်ထက် ကျဉ်းတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲဒီထဲမှာ သန္ဓေသားငယ် ဘယ်အရွယ်အထိ ကြီးလို့ ရနိုင်မလဲ။ ကိုယ်ဝန် ၂ လလောက်ဆို “မဆန့်မပြဲ” မဟုတ်၊ “မဆန့်ကွဲ” ဖြစ်လာတာ သေချာပေါက်ပါ။ ကွဲထွက်ရင် အရေးပေါ် ခွဲပေတော့။ ကိုယ်ဝန်ရှိခါစ၊ ဗိုက်အောက်နားက တအား နာတယ်ဆိုရင် ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ (အာလ်ထွာဆောင်း) မရှိရင် မွေးလမ်းကြောင်းထဲ လက်ထည့်စမ်းရတယ်။ သားအိမ်အ၀ နောက်(အောက်)နေရာ POD မှာ ဖေါင်းနေမယ်။ အပ်နဲ့စုပ်ရင် ပြွန်တည်ကိုယ်ဝန် ပေါက်လို့ ထွက်လာတဲ့ သွေး ရှိနေတာသိရမယ်။ လူနာခံနိုင်အောင်လုပ်ပြီး၊ ချက်ချင်းခွဲပေတော့။ ဒီကိုယ်ဝန်လူနာကတော့ ၉ လမက၊ နေ့စေ့ လစေ့မက၊ ရက်တောင် ကျော်နေပါပြီ။ ဗိုက်သိပ်မနာ သရိုးသရည်သာဖြစ်လို့ စမ်းတော့ သားအိမ်ကမပွင့်။ မကွဲဘဲနဲ့ ခွဲရတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ “ကလေး” နဲ့ “အချင်း” နှစ်မျိုးဖြစ်လာတာပါ။ Fetus ကလေးက Amniotic sac အရည်အပြည့်ရှိတဲ့ အိပ်ထဲမှာ ရှိနေရပြီး၊ Placenta အချင်းက သားအိမ်အတွင်းနံရံကို တွယ်ကပ်နေရတယ်။ မအေကို မှီခိုနိုင်ဘို့ပါ။ ကလေးဆိုတာ ဗိုက်ထဲကတည်းက အတော် လူလည်ကြတဲ့ကောင်။ မအေဆီက လိုချင်တာယူပြီး၊ မလိုတာစွန့်တတ်တယ်။ အချင်းကနေလုပ်ပေးတာပါ။
ရေမြွှာအိပ်ကို ဖေါက်ပြီး၊ ကလေးမွေးထုတ်ရတာ ပိုလို့တောင် လွယ်သေးတယ်။ ခါတိုင်း ဗိုက်ခွဲမွေးသလို သားအိမ် အောက်နားမှာ ကန့်လန့် ဒါးရာပေး၊ ခွဲမွေးစရာ မလိုပါ။ အကြာဆုံးနဲ့ သတိအထားရဆုံး အဆင့်ဖြစ်တဲ့ သားအိမ်နံရံကို သုံးထပ် ပြန်ချုပ်စရာလဲ မလိုတော့ပါ။ လူနာ့ သားအိမ်ဟာ “ကိုယ်ဝန်နဲ့သူနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလို” ဣနြေ္ဒရွှေပေးမရ၊ တွေ့ရပါတယ်။
သိပ်ခက်တာ လာပါပြီ။ အချင်းကို အူကနေ ဘယ်လို ခွါထုတ်မလဲ။ အူထဲမှာ အစာတွေရှိတယ်။ အူအောက်ပိုင်းရောက်လေ အစာက ဟောင်းလေ။ ဟောင်းလေ မကောင်းတာ များလေ။ ဗိုက်ထဲမှာ အူထဲကဟာ တစက်ကလေးမှ ထွက်မလာ မသင့်ပါ။ အူပေါက်လို့ကတော့ အစာအိမ်ပေါက်သလို၊ အပေါက်ကို ဖါပြီး၊ ဗိုက်ကို အတိုင်းတိုင်း ပြန်ပိတ် မရပါ။ အထက်က အူအစကို ဗိုက်အပြင်နံရံမှာ ပါးစပ်လို့ ဖွင့်ထားပြီး ၀မ်းသွားစေရတယ်။ အောက်က အူဆက်တာ-ဖါတာ ကျက်ပါမှ၊ စိတ်ချရပါမှ၊ ပြန်ဖွင့်၊ ပြန်ပိတ် လုပ်ရတယ်။ အူထဲက ပိုးမွှားတွေ သေအာင် ဆေးကလဲ ရွေးတတ်မှ။
ဒီတော့ ဒီလူနာရဲ့အချင်းကို အူ မထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီး ခွါထုတ်ဘို့ အရေးသည် ဆရာဝန် ညီအကိုမှာ မဟာ တာဝန်ကြီး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ ရှိအပ်တဲ့ Lion’s heart, Eagle’s eyes, Lady’s hand အရည်အချင်း သုံးပါး အနက် “(လေဒီ)ရဲ့ လက်” လိုလာပြီပေါ့ ခင်ဗျာ။
သတိကြီးခြင်းနဲ့ စိတ်ရှည်ခြင်း ဆိုတာတွေက ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာသာမက ခွဲစိတ်တာမှာပါ လိုတယ်။ ကပ်ကြေးနဲ့ ဒါးမပါ၊ တုံးတဲ့ ကရိယာတွေနဲ့သာ ဖြေးဖြေး ညင်သာ၊ အူတခွေချင်း တခွေချင်း ခွါချရပါတယ်။ အကူဆရာမတွေကတော့ ရေနွေးဝတ် နိုင်နိုင် လုပ်ပေးရတယ်။ အူနံရံက စိမ့်ထွက်လာသမျှ သွေးကို ရေနွေးဝတ်နဲ့ ဖိကပ်ပေးတာ အတော် အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ မတူတာက ခွဲစိတ်ရာမှာ ရေနွေးမပါဘူး။ သူတို့ခွဲခမ်း-မွေးခမ်းမှာ သွားခွဲပေးရရင် အတော် ကသိကအောင့် နိုင်လှတယ်။
အူကနေ ထွက်တဲ့သွေးကို ရေနွေးနဲ့ မနိုင်ရင် သွေးကြောညှပ် သေးသေးနဲ့ အပ်ခြည်ကိုသုံး ပိတ်ပေးရတယ်။ အူဆိုတာက အထပ် သုံးထပ်ရှိတာ။ အတွင်းဆုံးလွှာကို မထိလို့ကတော့ ပြဿနာမကြီးပါ။ အူ-အစာအိမ်ကို ဘယ်လိုချုပ်ရမယ် ဆိုတာ တောမှာ ကျတဲ့ ဆရာဝန်တိုင်း တတ်ကြွမ်းကြတယ်။ Catgut 3-0 “ကြောင်အူ ချုပ်ကြိုး၊ သရီးဇီးရိုး” ဘယ်နှစ်ကြိုး ကုန်လဲ မသိပါ။
အချင်းတခုလုံး ကွာကျမှ လက်ထောက်ဆရာဝန်က သီချင်းစဆိုပါတယ်။ ဗိုက်ကိုလည်း သူဘဲ ဆက်ပိတ်တယ်။ အတော် အားကိုးရတဲ့သူ။ ကျွန်တော်က အလှူရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။
အဲဒီခေတ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ မပေါ်သေးလို့ (ဘလောခ်)မှာတင်ဘို့ ပုံရိုက်မထားနိုင်လိုက်ပါ။ သုတေသနဆိုတာလဲ အားမပေးပါ။ စာတမ်းဖတ်စရာနေရာလဲ ကျဉ်းလွန်းလှပါတယ်။ မရှိ ရှိတာလေးနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြရတာကို သွားပြမိရင်လဲ ချို့တဲ့တာ၊ ဆင်းရဲတာကို လူမြင်ခံအောင် လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဆရာဝန်ကိုလည်း (အက်သစ်) မကျ၊ မလုပ်ရလို့ ပြောခံရမှာ သေခြာတာမို့၊ ဒီစာကို ဖတ်ရင် (ဖစ်ရှင်)လို့သာ မှတ်ပါခင်ဗျား။
မွေးပေးခဲ့တဲ့ကလေး မတ်တတ်ပြေးအရွယ်မှာ သူတို့အိမ်ကို တခေါက်ရောက်တယ်။ လက်ဖက်နဲ့ ထန်းလျက်အပြင် နှမ်းဆီဆမ်း အမဲခြောက်ဖုတ်နဲ့ ဧည့်သည်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Labels: Reproductive Health, Reproductive System
သွေးလှူရှင်များအနေနဲ့ သွေးလိုနေတဲ့ လူနာအတွက် သွေးလှူလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပီတိတွေ ခံစားရတာအပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိစေပါသေးတယ်။
လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ သွေးကို ပုံမှန်လှူဒါန်းပေးခြင်းဟာ သွေးထဲက ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ထိန်းထားနိုင်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပုံမှန်သွေးလှူဒါန်းတဲ့ အမျိုးသားများအတွက် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး များစေပါတယ်။ ထုတ်လှူလိုက်တဲ့သွေးနဲ့အတူ ပါသွားတဲ့ သံဓါတ်တွေကြောင့် သွေးလှူရှင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သံဓါတ်တွေ လျှော့နည်းစေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရာသီဓမ္မတာကြောင့် လစဉ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ သွေးတွေ ဆုံးရှုံးထွက်ရှိလို့ သံဓါတ်ပမာဏ လျှော့နည်းကြပေမယ့် အမျိုးသားများအနေနဲ့ သွေးလှူဒါန်းမှုကနေပဲ ကိုယ်တွင်းက သံဓါတ်ပမာဏကို လျှော့နည်းစေတာပါ။
သွေးလှူရှင်တွေမှာ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာဟာ သွေးမလှူတဲ့ လူထက် သုံးပုံတစ်ပုံ နည်းပါးတယ် ဆိုတာကို Kansas University Medical Centerက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏ များလွန်းနေတာဟာ မကောင်းပါဘူး။ သံဓါတ်တွေဟာ ကိုလက်စထရော ဖြစ်စေတဲ့အရာမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့။ ကိုလက်စထရော များလွန်းနေရင် နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်သွေးလှူဒါန်းတဲ့ သွေးလှူရှင်တွေမှာ သွေးလှူခြင်းဖြင့် သံဓါတ်ပမာဏ လျှော့ချနိုင်ပြီး ကိုလက်စထရောကိုလည်း လျှော့စေပါတယ်။
သွေးလှူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပြီး ဝ လာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ အမှားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ သွေးတစ်အိတ်ကြောင့် သွေးလှူရှင်မှာ ကယ်လိုရီ ၆၅၀-စာ လျော့ကျစေပါတယ်။ သွေးလှူလိုက်လို့လည်း အားနည်းမယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ထုတ်လှူလိုက်တဲ့ သွေးတွေကို အစားထိုးပေးဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးအသစ်တွေကို အချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် သွေးဆဲလ်အသစ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူဒါန်းတာဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ သွေးသစ်တွေ ရရှိစေပြီး ကျန်းမာ လန်းဆန်းစေပါတယ်။
သွေးလှူဒါန်းတဲ့အခါ သွေးမလှူခင်မှာ သွေးလှူရှင်ကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်၊ သံဓါတ် ပမာဏ၊ ကိုယ်အလေးချိန် စတာတွေကို စစ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူရှင်အနေနဲ့ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခံရသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါ့တွေအပြင် သွေးထဲမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုး၊ ကာလသားရောဂါပိုး၊ ငှက်ဖျားပိုး ပါ မပါကိုပါ စစ်ပေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ရောဂါပိုးတွေ ရှိမရှိ သိချင်လို့ သွေးလှူဒါန်းတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ပုံမှန် သွေးလှူဒါန်းတာဟာ လူသားဆန်တဲ့ ကျေနပ်ပီတိတွေအပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး များတယ်...ဆိုတာ သိပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း သွေးလှူပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ...
မေးမြန်းသူ(၁) “ရောဂါတစ်ခုရှိနေပါတယ် ဆရာရေ ပြောရမှာတော့ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ နားနှင့်မနာပဲ ဖ၀ါးနဲ့သာ နာစေချင်ပါတယ်။ sexy girl တွေကြည့်တဲ့အခါ အမြဲတန်းလိုလို လိင်တံက semen သုက်အရည်တွေ ထွက်တက်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် ကုစားရမယ်ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေစေချင်ပါတယ်။ လိင်အဂ်ါမှာ အရည်မစိုအောင်း လုပ်သင့်သလား၊ မလုပ်သင့်ဘူလားဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြား ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက် လိင်အဂ်ါမှာ အရည် မစိုအောင် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုကျိုးတွေ၊ ကောင်းကျိုးတွေကို မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ လူတိုင်း ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာရဲ့ web-site ထဲမှာ ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ရှက်တက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ မေးရမှာ အဆင်မပြေနိုင်ကြပါဘူး။”
မေးမြန်းသူ(၂) “စိတ်တော့မရှိကြပါနဲ့နော်၊ ကျနော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ စိတ်ပညာနဲ့မကြည့်ပဲ၊ ဆေးပညာနဲ့ပဲ ကြည့်ရပါဗျာ။ ကျနော် လူပျိူဝင်ကာစ တစ်ခါကတော့ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ လူပျိုဝင်ကစပဲလို့ ထင်ပြီး၊ နေလိုက်တယ်။ ယောကျားအင်္ဂါကနေ အရည်ကြည့်လေးတွေထွက်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မထွက်တော့ဘူး။ အခု ၂၃ ၀င်ခါစမှပဲ ထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ ဒီလို့ အပြာကားတွေ ကြည့်ရင်ထွက်တယ်။ မကောင်းတဲ့စကားတွေ ပြောရင်လဲ ထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စိတ်တက်ကြွလို့ပဲဆိုပြီး နေလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မစဉ်းစားပဲလဲ ထွက်နေပြန်ရော။ ဘောင်းဘီလဲရတာလဲ မနည်းတော့ဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲ ဘာဆေးတွေဆောင်ထားရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ရင် အားပြတ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ စားတိုင်းလဲမ၀ဘူး။ ပိန်ပိန်လာတယ်။ အဲဒါ အစများ ဖြစ်လာနိုင်မလားဗျာ။ ဟိုရောဂါကလဲ ၂နှစ် နဲ့ ၁၀နှစ် ကြားမှာ ပေါ်တက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရည်တွေ မကျအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ။”
ဒီလိုဖြစ်တာက သိပ် (နော်မယ်လ်) ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတိုင်းဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးလဲ ဖြစ်တာဘဲ။ လိင်စိတ်ကို ဆွပေးတာကို ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကူးတာဖြစ်ဖြစ် လိင်အဂ်ါမှာ အရည်စိုလာတာ ပုံမှန်ပါ။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ လိင်စိတ်ဆိုတာမျိုးက စိတ်အပြင် ဟော်မုန်းဓါတ်ကြောင့်ပါ ဖြစ်ရတာပါ။ စိတ်မကစားလဲ ဟော်မုန်းသတ္တိပြလာရင် ဒီစိတ်က ကြွလာတယ်။ ဖြစ်ဖန်များသူဆိုရင် အကျင့်လိုရလာတတ်သေးတယ်။
မအိပ်ခင်က ဘာမှ စိတ်ကူး မထားတာတောင်၊ အိပ်မက်မက်ယင်း အိပ်ရာထဲမှာ သုတ်ထွက်တာမျိုးလဲ ရှိတယ်။ ဒါဟာ ထွက်ပေးဘို့ လိုနေတာကြောင့်လို့ ပြောရင် ရနိုင်တယ်။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီး တည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ လူ့ဇီဝကမ္မအလုပ်များဟာ အင်မတန် ကောင်းလွန်းလှတဲ့ စက်တို့ ကွန်ပြူတာတို့ထက် အဆ အများကြီး သာတယ်။ ပိုတာ-မလိုတာကို ထုတ်ပြစ်တတ်တယ်။ မသင့်တာကို သန့်ပေးနိုင်တယ်။ လိုတာကို ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
ဒီပြဿနာမှာလဲ Semen အရည်ကြည် ဖြစ်ဖြစ် Sperm သုတ်ရည်ဖြစ်ဖြစ် ထွက်သင့်ချိန်မှာ ထွက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Semen အရည်ကြည်ဆိုတာက လိင်စိတ်ပေါ်လာရင် အင်္ဂါအ၀မှာ စိုလာတာကိုပြောတာပါ။ တကယ်လို့ ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ပေးမှုဖြစ်တယ်။ Sperm သုတ်ရည်ကတော့ လိင်စိတ် ပြည့်ဝ-ကျေနပ် သွားချိန်မှာ ယောက်ျားအင်္ဂါကနေ ထွက်တာပါ။ မိန်းမတွေမှာလဲ Orgasm ရတယ်ဆိုရင် အရည်ထွက်လာတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းစေတာ အမှန်ပါ။ လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ နှလုံးခုန် မြန်မယ်၊ သွေးလျှောက်တာ ပိုလာတယ်။ နွေးလာတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာတောင် အေးမှန်းမသိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အား ပိုသုံးပြစ်လိုက်တယ်။ (ကလိုရီ) လျှော့ချင်ရင် နည်းကောင်းတခုလို့တောင် ဆိုကြသေးတယ်။
Orgasm ရသွားရင် ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် (အင်နာဂျီ) အများကြီး ကုန်သွားတာမို့ ခြေပြစ်-လက်ပြစ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ တခါတည်း အိပ်စက်လိုက်ရင် အားအင်တွေ အလိုလို ပြန်ပြည့်လာတယ်။ မနက် အိပ်ယာထချိန်တိုင်းမှာ အားမှန်သမျှ ပြည့်ဝနေတယ်။
တကယ်လို့ အိပ်ရာထဲမှာ သု့ဖါသာ သုတ်လွှတ်တာ ဖြစ်ဖြစ်နေရင် ညမအိပ်ခင် ရေမသောက်ဘဲနေ၊ ဆီးသွားပြီးမှ အိပ်ရာဝင်၊ တခါခါ (မာစတာဘိတ်) လုပ်ပါလို့ တချို့က အကြံပေးတယ်။
အားအင်ကုန်တာကို နားတာ၊ အိပ်တာနဲ့ မလုံလောက်ရင် ရိုးရိုးအားဆေး (ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု)ကို သောက်ပါ။ အမျိုးအစား ကောင်းတာ ရွေးသင့်တယ်။ နာမည်ရှိ ဆေးကုမ္ပဏီက လာတာမျိုးပြောတာပါ။ အစားအသောက်မှာလဲ အားဖြစ်စေတာမျိုး ပိုစားပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ဆိုရင် ဗီတာမင် ဘီ၊ စီ၊ အီး အပြင် ဇင့်(သွပ်ဓါတ်) နဲ့ မက်ဂနီဆီယံ ဓါတ်ဆားတွေ ပါဘို့ လိုတယ်။ အစားအစာထဲကဆိုရင် ပဲပုတ်စေ့ကကောင်းသတဲ့။ ယောက်ျားတွေအတွက် ကြက်ဥ၊ ငှက်ပျာသီးကို ညွှန်းတယ်။ သင်္ဘောသီးကို အရှောင်ခိုင်းတာကတော့ သုတေသန မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီး တယောက်ချင်းက ပြောတာပါ။ နှလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့ အစားတွေဟာ ဒီကိစ္စအတွက်ပါ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုတာလဲရှိတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာကို ကိုယ်က မဖြစ်စေချင်ရင် အမြင်-အကြား-စိတ်ကူးစိတ်သမ်း-အထိအတွေ့၊ လိင်စိတ်ကြွစေတာမှန်သမျှ ရှောင်ပါ။ အားနည်းတာ သက်သာအောင် ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ခဏအနားယူလိုက်ပါ။ စိတ်မှာ “ငါ ဒါ့ကြောင့် အားတွေ ယုတ်သွားလိုက်တာ” လို့ မတွေး၊ မထင်ပါနဲ့။ “ငါ့မှာ အားတွေ ပိုနေလို့ ဖြစ်နိုင်စွမ်းတာ” လို့ မှတ်ပါ။ “အသုံးပြုစဉ် အားပြန်ဝင်သည်” ဆိုတဲ့ “အေစီ-ဒီစီ ဒိုင်နမို” ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
Labels: Q and A, Reproductive System, Sex Education
Labels: health education, Q and A, Skin health
oxidation ကို မြန်မာလို ဓာတ်တိုးခြင်းလို့ ဓာတုဗေဒက ဆရာတွေက ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ oxygen molecule တစ်လုံးပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ပေါင်းလိုက်ရင် ဒြပ်ပေါင်း တော်တော်များများဟာ ပုံပျက်သွားလေ့ရှိတယ်။ ပုံပျက်သွားတာကြောင့် မူလလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ tissue တွေ ပျက်စီးသလို cell တွေလည်း သေကျေကြပါတယ်။ အရေပြားမှာ ဖြစ်ရင် tissue တွေ ပျက်စီးတာ များတာကြောင့် အိုမင်းခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တကယ်တော့ oxidation က လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မလိုအပ်တော့တဲ့ tissue တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေ နဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ oxidation ကို ဖြစ်စေတဲ့ reactive oxygen free radicals (reactive oxygen species) (ROS) လို့ခေါ်တဲ့ ငတိကလေးတွေကေ၇ှ့တန်းက ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အစွမ်းတွေ စွပ်ပြနေရင်တော့ အကောင်းထက် အဆိုးက ပိုများလာမှာပါ။ oxidative stress ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြား နှင့် မျက်ကြည်လွှာ - နေရောင်ခြည် (UV ray, gamma ray and so on)၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)၊
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း - nitrate (ယမ်းစိမ်း) ပါဝင်သော အကင်များ၊ ၀က်အူချောင်းများ စားခြင်း၊ အရက်၊ မီးကင် ကြက်တိုက်ထားသော အစားအစာများ၊
အသက်ရှူလမ်းကြောင်း - ဆေးလိပ်ငွေ့၊ ပြင်ပမှ လေထုညစ်ညမ်းစေသော ဓာတ်ငွေ့များ၊ ကား အိပ်ဇောငွေ့များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ထွက်သော ရှူရန်မသင့်သည့် ဓာတ်ငွေ့များ (အနံ့ရှိချင်မှရှိမည်)၊ မီးရှို့ခြင်းမှ ထွက်သော မီးခိုးငွေ့
အထက်ဖော်ပြပါ အစားအသောက်နှင့် ပြင်ပမှ အရာများသည် လူ့ကျန်းမာရေးအတွက် လုံးဝ မသင့်တော်ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပါက ဆဲလ်များကို ဓာတ်တိုးစေပြီး သေစေနိုင်သည်။ မသေပါက ကင်ဆာအဆင့်အထိ ရောက်အောင် ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို လျင်မြန်စေသည်။ မလိုအပ်ဘဲ နေမကောင်းဖြစ်တော့ ဆေးဖိုးဝါးခ မကုန်သင့်ဘဲ ကုန်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတာကတော့ လူအများစု သိမည်ဟု ယူဆသည့်အတွက် မဖော်ပြတော့ပါ။ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် နှာခေါင်းစွပ်တပ်ထားပါဟု ရေးထားလျင် မြန်မာကျင့်မြန်မာကြံဖြင့် ပြီးစလွယ် မတပ်ဘဲထားဖို့ မကြံပါနဲ့။ လိုအပ်သောကြောင့် တပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလုပ်သားအများစုက မျက်နှာဖုံးတို့ နှာခေါင်းစွပ်တို့ဆို တပ်ရမှာ အလွန်ပျင်းပုံရတယ်။ ကိုယ့်အသက်ကို ငဲ့ရင်တော့ တပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာ အလွန်ပေါများလာတဲ့ အကင်ဆိုင်တွေ။ ဘာ အာဟာရမှလည်း မရဘဲ ဒုက္ခပေးမည့် အစားအသောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြတ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး လူအများ အကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နေတဲ့ စီးပွားေ၇းသမားတွေ ရှိနေသ၍တော့ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍဟာ မှေးမှိန်နေအုံးမှာပါ။ Cooporate social responsibility တို့ business ethics တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများသိအောင် လုပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
စိတ်ဖိစီးမှုကို လူတိုင်းကြုံဖူးပါတယ်။ ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကနေ လူကြီး ဖြစ်တဲ့အထိ ကြုံရတာပါ။ ကလေးတွေမှာလည်း mental stress ၇ှိတာပါပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရုပ် ရပါ့မလား၊ လူကြီးတွေက ငါ့ကို ချစ်ပါ့မလား စသည်ဖြင့် သူ့အပူနဲ့ သူတော့ ရှိကြတာပါပဲ။ အသက်ကြီးလာတော့ အပူတွေလည်း ကြီးလာတာပေါ့။ ဒီနေ့ဒီခေတ်လို အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ လောကကြီးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာရင် အပိုင်း ၁ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့stress response ၀င်လာတယ်။ နှလုံးခုန်တာ နည်းနည်းမြန်လာမယ်။ သွေးဖိအားတက်လာမယ်။ အစာချေတာ မကောင်းတော့ဘူး။ ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူး။ အဆီဓာတ်တွေကို သေချာမချေဖျက်နိုင်တဲ့အတွက် body ကနေ မစွန့်ပစ်နိုင်တော့ဘဲ ကိုယ်မှာ အဆီတွေစုလာတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရင် ၀လာမယ်ပေါ့။ အအိပ်လည်းနည်းပြီး အစာလည်း အများကြီးမစားဘဲ ဘာဖြစ်လို့ ၀လာလဲဆိုရင် stress ကြောင့်လို့ ပြောရမှာပဲ။ အဲဒီလိုဖိစီးနေတာက ရက်ပိုင်း လပိုင်းသာမကဘဲ နှစ်ချီပြီး ကြာလာရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ သွေးတိုး နှလုံး ဆီးချိုရောဂါတွေ ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများယုံကြည်ကြတာက enervon C လို vitamin C high dose ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေ သောက်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာတယ် ဆိုပြီး ဖြစ်တယ်။ ဆေးကြော်ငြာတာကလည်း အဲဒီလိုဆိုတော့ ယုံကြတာမဆန်းပါဘူး။ vitamin C က မည်သည့် stress ကြောင့်မဆို tissue ပျက်စီးတာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ပေးတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် သူ့ကို သောက်လိုက်လို့ စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်နေတာတွေကတော့ လျော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူက ရုပ်ပိုင်းကို ကုတာပါ။ စိတ်ပိုင်းကို ကုတာမဟုတ်ဘူး။ enervon C တစ်နေ့ ၁၀လုံးသောက်လည်း အလုပ်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ရင် ဖိစီးမြဲ ဖိစီးနေမှာပါပဲ။ နောက်ပြီး သူက ကြာရှည်စွဲသောက်ရင် လူအတွက် ကောင်းကျိုးရှိမရှိဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ vitamin C တစ်နေ့ လိုအပ်ချက်က ၂၀၀ ပဲ ရှိတယ်။ သူ့ဆေးမှာ ၅၀၀ ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ၃၀၀ ကို ကျောက်ကပ်ကနေ စွန့်ပစ်နေရတယ်။ ရေရှည်မှာ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်နိုင်တယ်လို့ ဆေးကျမ်းတွေမှာတော့ ရေးတယ်။ ဘယ်လောက် dose ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် သောက်ရင် ဖြစ်မယ်လို့တော့ မရေးထားဘူး။ အဲဒီတော့ ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ကုသဖို့အတွက် ရေတိုဆိုရင် သောက်ဖို့အားပေးပါတယ်။ ရေရှည်အတွက်ကတော့ ဘာဖြစ်မယ်မှန်းမသိတဲ့ ဆေးတစ်ခုကို မသောက်တာကောင်းတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်တဲ့ Time Management အကြောင်းကို သတ်သတ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါ့မယ်။
လူတစ်ယောက်စားလိုက်သမျှ အစာတွေကို အူလမ်းကြောင်းက စုပ်လိုက်ပြီးရင် အားလုံးကို အသည်းဆီကို အရင်ပို့ပါတယ်။ အသည်းမှတဆင့် လိုရင်လိုသလို မလိုရင် မလိုသလို အာဟာရဓာတ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲပေးပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ဓာတ်တစ်မျိုးမျိုးက လိုအပ်သည်ထက် အလွန်အမင်း များနေလျင်ဖြစ်စေ နည်းနေလျင်ဖြစ်စေ metabolic stress ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း ကြုံတွေ့ရပြီး သတိမထားမိတာကတော့ အစားစားချိန်မမှန်ခြင်းနှင့် အစာမှားစားခြင်းတို့ ဖြစ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှု များနေတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့။ အစာစားချိန်မမှန်ခြင်းဆိုတာကတော့ နံနက်အိပ်ယာထမှာ နံနက်စာကို လုံလောက်စွာမစားခြင်း၊ နံနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာကို ပေါင်းစားခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည် သကြားဓာတ် စွမ်းအင်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကို ပုံမှန်လိုအပ်နေပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများသော အချိန်များ၊ နလန်ထစ အချိန်များ၊ ဖျားနာနေသောအချိန်များတွင် ပိုမိုလိုအပ်တတ်ပါသည်။ သို့သော်လူတစ်ယောက်က အစားကို ပုံမှန်မစားဘဲ စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်ရောက်မှ ထစားပါက အသည်းမှနေ၍ ကိုယ်တွင်းကလီစာများ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရန် တစ်နည်းအားဖြင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် stress hormone တွေကို ထွက်အောင် လုံ့ဆော်လေသည်။ ရလဒ်အဖြစ် သကြားဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်ပေမယ့် stress response ဒဏ်ကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်မျှ အလုပ်များစေကာမူ လုံလောက်ပြီး အာဟာရရှိသည့် breakfast ကို စားခြင်းသည် နေ့တစ်နေ့တာအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ညအိပ်လိုက်ကတည်းက လူက ဘာအစာမှ မစားတော့ပေ။ ထိုအခါ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျဆင်းနေတတ်သည်။ နံနက်စာစားလိုက်ပါက သကြားဓာတ်ပြန်တက်လာပြီး stress hormone များမထွက်အောင် တားဆီးထားနိုင်ပါသည်။ ညအိပ်ခါနီး ပျားရည် ၂ ဇွန်းခန့်သောက်ခြင်းသည်လည်း stress ကြောင့် ဗိုက်ရွှဲခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ သူက တစ်ညလုံး သကြားဓာတ်ကျမသွားအောင် ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ပျားရည်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အစာမှားစားခြင်းဆိုတာက တော့ လူက စိတ်ရှုပ်လာရင် ကိုယ်စားချင်တာ စားတော့တာပဲ။ သိပ်ပြီး စည်းမရှိတော့ဘူး။ ကိုယ်စားတဲ့အစာက junk food လို့ခေါ်တဲ့ supermarket တွေမှာ ရောင်းတဲ့ မုန့်တွေစားဖြစ်နေရင် အဆိုးဆုံးပဲ။ မုန့်ကတော့ အကောင်းစားပဲ။ packing လေးကလည်းလှတယ်။ အရသာကလည်း ချိုနေတာပဲ။ ဈေးကလည်းကြီးတော့ ကောင်းမယ်ထင်တာပေါ့။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲဒီလို အစာတွေစားပြီး America ကလူငယ်တွေ ဖက်တီးတွေ ဖြစ်လာတာဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ ခေတ်ပေါ်အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ biscuit တွေ cracker တွေ cookies တွေ burger တွေ cake တွေ donut တွေ အားလုံးဟာ လူအတွက် အကျိုးရှိတာ တစ်ခုမှ မပါပါဘူး။ တာရှည်ခံအောင် အရသာရှိအောင် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ အဲဒါတွေကို မစားရဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးတဲ့အချိန်မှာ သွားစားရင် ပိုဆိုးနိုင်တယ်။ သူတို့က အချိုဓာတ်လွန်ကဲတော့ စားပြီးတာနဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်က ထောင်တက်သွားတယ်။ အဲဒီမုန့်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ sugar ရဲ့ ဓာတုဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း ရိုးရှင်းတာကြောင့် အစာချေတာမြန်တယ်။ body က စုပ်ယူတာလည်း မြန်တယ်။ သကြားဓာတ်ကို အသုံးချဖို့ insulin hormone က ထွက်လာတယ်။ သူက သကြားဓာတ်နည်းနည်းပဲ တက်ရင် နည်းနည်းပဲ ထွက်တယ်။ များများနဲ့ မြန်မြန်တက်ရင် များများနဲ့ အကြာကြီးထွက်တယ်။ ရလဒ်အဖြစ် သကြားဓာတ်ကတော့ insulin လက်ချက်ကြောင့် ကျသွားပါရဲ့။ သကြားဓာတ်ကျပြီးလည်း insulin က ဆက်လက်ရှိနေသေးတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်ရှိရမည့် ပမာဏ အောက်ကိုေ၇ာက်အောင် စွဲချပါတော့တယ်။ သကြားဓာတ်နည်းသွားတော့ လူက ခေါင်းက ၇ိပ်တိတ်တိတ်ဖြစ်လာတယ်။ နုန်းတယ်။ ဗိုက်ပြန်ဆာလာတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လွယ်လွယ်ရတဲ့ ခေတ်မှီမုန့်တွေ ထက်စားရင် ခုနတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ insulin သံသရာ ပြန်လည်ပြန်ကော။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက simple carbohydrate တွေပါဝင်တဲ့ မုန့်တွေအစား complex carbohydrate တွေ ပါဝင်တဲ့ ဆန်၊ ဆန်နဲ့လုပ်သောမုန့်များ၊ ကွေကာအုပ် နဲ့ အရသာမချိုတဲ့ ပေါင်မုန့်အကြမ်းတွေကို ပဲ စားသုံးဖို့ ပြောလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင် မြို့ပြမှာ နေထိုင်ကြသူတွေဟာ အနောက်တိုင်း လူနေမှုပုံစံကို အလိုလိုနေရင်း လိုက် copy ကူးနေသလို ဖြစ်လာတယ်။ US တို့ UK တို့မှာ 1980 လောက်တုန်းက ဖြစ်သလိုပေါ့။ အသစ်ပေါ်တဲ့ burger စားမှ ခေတ်မှီတယ်ထင်တယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင်များလာတော့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုမပြုကြတော့ဘူး။ အဲဒီလိုနေခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း မသိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။ အခုတော့ သူတို့က သိသွားပြီ။ ဒါကြောင့် ပြင်နေကြပြီ။ ဒီမှာကတော့ လိုက်ကူးလို့ကောင်းတုန်း။ လူအချို့က အ၀မလွန်ဘဲ ကျန်းမာချင်ရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနည်းတိုင်း ၀မှာမဟုတ်ဘူး။ အထက်က ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ မ၀အောင် အာမခံနိုင်ပါတယ်။ အခုလောက်ဆိုရင် stress ရဲ့ သဘောသဘာဝကို နည်းနည်းသောက်သိသွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဖိစီးမှုကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာကြပါစေလို့ နှစ်သစ်ကူးနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဆေးကျောင်းမှာတုန်းက basic medical science ဘာသာရပ်တွေ သင်ခဲ့ပေးသော သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးကို ကန်တော့ပါ၏။
Stress ကိုမြန်မာလို ဘာသာပြန်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုလို့ ပြန်လေ့ရှိတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို ပြန်လိုက်ရင် မပြည့်စုံတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်တဲ့နေရာ မှာလည်း စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက် နေတတ်ကြတယ်။ မထိရောက်တော့ဘူးပေါ့။ တကယ်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုလို့ ပြောချင်ရင် mental stress လို့သုံးပါတယ်။ stress လို့တိုက်ရိုက်သုံးရင် မည်သည့်နေရာမှမဆို ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖိစီးမှုကို ပြောတာပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်ရင် physical stress, စိတ်မှာဖြစ်ရင် mental stress, ကိုယ်တွင်းအဂါင်္ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာဖြစ်ရင် physiological stress, ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရင် pathological stress ဆိုပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ stress ကိုပျောက်အောင် ကုချင်ရင် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအချင်းအရာကို သေချာသိမှ ပျောက်နိုင်မှာပါ။
ဘာ့ကြောင့် stress ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ခန္ဓာမှ ၎င်းကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ၂ မျိုး ၂ စားတုံပြန်ပါတယ်။ တစ်ခုက အာရုံကြောတွေကနေ ချက်ချင်းတုံပြန်တာဖြစ်လို့ မြန်ဆန်ပြီး နောက်တစ်နည်းကတော့ adrenal gland ကနေ hormone တွေ ထုတ်လွှတ်ပြီး တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံကြောတွေကနေ တုံပြန်ရင် မြန်ဆန်သော်လည်း တခဏသာခံသည်။ hormone တွေကတော့ အထွက်နှေးသော်လည်း ကြာကြာခံသည်။ အဲဒီလို တုံ့ပြန်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို stress ဒဏ်ခံနိုင်အောင် ထိန်းညှိပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ လူတစ်ယောက်က တောထဲမှာ လမ်းလျောက်နေတုန်း မြေခွေးတစ်ကောင်ကို တွေ့တယ်ဆိုပါစို့။ မြေခွေးကို ကြောက်လို့ ခဏလောက် ကြောင်သွားနိုင်ပေမယ့် မြေခွေးကသာ ကိုယ့်ဆီကို ပြေးလာရင် အသက်အန္တာရယ်က ကင်းလွယ်ဖို့အတွက် မည်သူမဆို ထွက်ပြေးမည်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ stress response ၀င်လာသည်။ အာရုံကြောများမှ noradrenaline နဲ့ adrenaline လို့ခေါ်တဲ့ stress hormone တွေထွက်လာပါသည်။ endocrine ဘက်ကတော့ stress hormone တွေ ထုတ်တဲ့ adrenal gland ကလည်း အဲဒီ ၂ မျိုးကိုပဲ သွေးထဲကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း၊ သွေးဖိအားတက်လာခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်လာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပြေးလွှားရန်အတွက် ခြေသလုံးကြွက်သားများကိုလည်း သွေးများ ပိုမိုစီးဆင်းစေပါသည်။ ထိုအခါ ပြေးရလွှားရ ပိုမိုလွယ်ကူသွားပြီး အသက်ဘေးမှ လွတ်သွားနိုင်ပါသည်။ stress response ကြောင့် ဖြစ်သွားသော အကျိုးဆက်များ အလွန်များပြားပါသည်။ လူသတ္တ၀ါများ ကမ္ဘာများပေါ်တွင် အသက်ရှင် ရပ်တည်လာနိုင်သည်မှာ stress ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်သည်။ stress hormone များကိုထုတ်လွှတ်သည့် adrenal gland သာမရှိပါက လူသားများအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ပင် မဖြစ်နိုင်ဟု ပညာရှင်တို့က ဆိုကြပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အစာခြေသော လုပ်ငန်းများ၊ အစာကို စုပ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုနိုင်သည့် chemical compound ဖြစ်သည်အထိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ tissue တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ခဏရပ်နားထားရပြီး လတ်တလောအသက်ဘေးအတွက် စွမ်းအင်များကို အသုံးပြုရသည်။ စွမ်းအင်ဟုဆိုရာ၌ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်း ၃မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ သကြားဓာတ်၊ အသားဓာတ်နှင့် အဆီဓာတ်တို့ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၃ မျိုးထဲတွင် အရေးအကြောင်းကြုံလျင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးလို့ရသည်မှာ သကြားဓာတ် (glucose) တစ်မျိုးသာရှိသည်။ ကျန်သော ၂ခုကြား ဖြိုခွဲဖို့ ကြာသောကြောင့် glucose ကုန်မှာသာ (သို့) မသုံးနိုင်မှသာ သုံးလေ့ရှိပါသည်။ oxygen မရှိသောအခါ ကြွက်သားများအတွင်း အရေးပေါ်သုံးသည့် ketone body ဆိုသည့် ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးလည်းရှိသေးသည်။ သို့သော် ယခုရေးသားလိုသောအကြောင်းအရာနှင့် မဆက်စပ်သောကြောင့် မဖော်ပြတော့ပါ။
အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သော stress response သည် မည်သည့် stress အမျိုးအစားမဆို တုံ့ပြန်ပုံခြင်းတူပါသည်။ stress ကြောင့် ဖြစ်လာသော response သည် တခဏ ရေတိုအချိန်ကလေးတွင် အလွန်အသုံးတည့်သော်လည်း အချိန်ကြာကြာ response ဖြစ်နေပါက လူအတွက် အန္တာရယ်ရှိလာနိုင်ပါသည်။ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သလို နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သည့် အစာခြေခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အာဟာရဓာတ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထို့အတူ ပြင်ပမှဝင်ရောက်လာသော ရောဂါပိုးများ၊ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများ၏ ရန်မှ ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သလို ၎င်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော tissue များကို ပြင်တန်ပြင် မပြင်တန်တော့ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ လိုအပ်လှသည်။ ထိုသို့မပြုလုပ်အားပါက
အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ခြင်း၊ အစာအိမ်တွင် အနာများဖြစ်ခြင်း၊ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း
ကြွက်သားများနည်းသွားပြီး ၎င်းတို့နေရာတွင် မခြေဖျက်အားသည့် အဆီများစုဝေးလာခြင်း (စုဝေးသောနေရာများမှာ ဗိုက်ခေါက်၊ လက်မောင်း၊ ပေါင်၊ မျက်နှာ၊ အတွင်းကလီစာများ)
ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများကို မစွန့်ဖယ်အားသောကြောင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ များလာခြင်း
နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ နှင့် ဆီးချိုရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်း
အစရှိတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မှာ ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် stress ဖြစ်တယ် ဆိုတာနဲ့ အဲဒီ stress ကို ဘယ်လိုတိုက် ထုတ် မလဲ ဆိုတာကို အပိုင်း ၂ မှာ ဆက်လက်ရေးသားပါ့မယ်။
ယင်ကောင်ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မတို့ကို အနည်းနဲ့အများ စိတ်ညစ်ညူးစေတဲ့ အကောင်ဆိုတာ ငြင်းဆန်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။ ယင်ကောင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ လူသွေးစုပ်တဲ့ ယင်ကောင်နဲ့ လူသွေးမစုပ်တဲ့ယင်ကောင်ဆိုပြီး ခွဲခြားပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ တော့ သွေးစုပ်တတ်တဲ့ ယင်ကောင်အကြောင်းကို အသားပေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မပထမဆုံး ပြောပြချင်တဲ့ယင်ကောင်က တော့ အာဖရိက တိုက်အချို့သော နေရာတွေမှာ African Tryptosomiasis ဒါမှမဟုတ် sleeping sickness လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါကိုသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Tsetse fly လို့ ခေါ်တဲ့ ယင်ကောင်တစ်မျိုး အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားတဲ့ Tsetse fly အကိုက်ခံ ရတဲ့ သူတွေထဲကမှ နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၂၅၀ ၀၀၀မှ ၃၀၀ ၀၀၀ အတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးရတာမို့ ခရီးသွားဝါသနာထုံသူများ အနေနဲ့သိထားသင့်တဲ့ ယင်ကောင် တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြောက်စရာ ကောင်းလှတဲ့ရောဂါကို သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ယင်ကောင်တစ်မျိုးမို့ tsetse fly ဟာ သုတေသနပြုတဲ့သူတွေကြားမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ယင်ကောင်တမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှအားဖြင့် လေးကြိမ်ခန့်မျိုးပွားနိုင်တဲ့ အဲဒီယင်ကောင်ဟာ သူ့သက်တမ်းတလျှောက်မှာ ၃၁ ကြိမ်ခန့်မျိုးပွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Tsetse fly ဟာ မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိပြီး ယင်ကောင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အရည်ဒါမှမဟုတ် သွေးစုပ်ယူဖို့ နှုတ်သီး(propbosis) ကလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှုတ်သီးကလည်း ဖြောင့်တန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တီနာ မှာ အဆစ်သုံးဆစ်ပါမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အဆစ်ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်မှာတော့ အမွေးတစ်ချို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေကတော့ အသားခုတ်ဓါးပုံစံဖြစ်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Tsetses ဟာ အကြမ်းအားဖြင့် အိမ်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ယင်ကောင်များနဲ့ ဆင်တူပေမယ့်လည်း သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ သွင်ပြင်အမူအရာတွေကြောင့် အခြား ယင်ကောင်တွေနဲ့ခွဲခြား မှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Tsetse fly ဟာ နားနေတဲ့အခါ မှာ တောင်ပံတခုနဲ့တစ်ခု ကို တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ထပ်ပြီးနားတတ်တာမို့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ တောင်ပံနှစ်ခုစလုံး တစ်ထပ်တည်း ရှိနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Tsetse fly ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို လေ့လာပြီး စာဖတ်သူတို့ ခရီးသွားတဲ့အခါ ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထီးရော အမပါ သွေး စုပ် တတ်ကြပြီး နေ့ပိုင်းမှာ သွေးစုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိကြပါတယ်။ Tsetse fly ကျက်စားတတ်တဲ့နေရာ ကတော့ အာဖရိက တိုက်အချို့သော နေရာတွေဖြစ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Tsetse fly ဟာ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ နေရာ ဒေသတော်တော်များများမှာ ပြန့်နှံ့နေပြီး အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားဖို့ရာခက်ခဲနေသေးတာမို့ Tsetse fly ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ African Tryptosomiasis မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒီနေရာတွေကို သွားတဲ့အခါ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အ၀တ် အစားဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါအကြောင်း အသေးစိတ်ရေးထားတာကိုတော့ ဒီပို့စ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်...။
မွန်းသက်ပန် (ဆေး ‐ ၁)
၂၀၁၀ ဧပြီလ ၃ ရက်
Labels: Environmental health, Lifestyle